About Us - Shandong Hengyi Animal Husbandry Co., Ltd.
Shandong Hengyi Animal Husbandry milina CO., LTD. Tanàna ao amin'ny Longkou, tanàna iray eny amoron-dranomasina tsara tarehy any Yantai, Shandong Province, izay mety manana fitaterana, atsinanan'i Yantai, Qingdao atsimo, akaikin'ny West Longkou seranan-tsambo, avaratra Dalian manerana ny ranomasina. dia teknolojia indostria fikambanana izay Mitambatra fikarohana, fanamboarana sy vy promotion.It miteraka vokatra toy ny akoho cages, kisoa mitaiza fitaovana, biby husbandry milina, rivotra mangatsiaka fitehirizana harato sy ny sisa, izay tena deraina ny mpampiasa.
Mba hifanaraka fa ilaina ny biby husbandry fampandrosoana, ny andian-mandeha ho azy milina fitaovana vokarin'ny ny orinasa nahatsapa ny mandeha ho azy fanaraha-maso ny sakafo rafitra, rivotra rafitra, rano fisotro rafitra, tain-drorohany rafitra ary manana ny toetra mampiavaka ny antonony rafitra, milamina fahombiazana sy mafy faharetana.
Ny biby husbandry milina ao amin'ny orinasa dia afaka manome antoka ny fanompoana fiainan'ny dimy ambin'ny folo years.In ny fampiasana ny toeram-pambolena lehibe eto amin'izao tontolo izao, ny fitaovana efa nahavita vokatra tsara. Foana isika manaraka ny fandraharahana filozofia ny "toetra toy ny tafavoaka velona, Nalaza ho fampandrosoana, ny firaisan-tsaina sy ny fandrosoana, mitohy zava-baovao"
Ny orinasa mpanjifa fahafaham-po foana ny maka tahaka ny andraikiny, miaraka amin'ny hivadika, tsara vokatra sy ny asa fanompoana tsara ho anao ny manamboatra tetezana mba hanome ny tsara indrindra ho fanompoana na mpanjifa-baovao sy ela. Tonga soa eto amin'ny mpanjifa ho avy hanontany ny filaminana, dia ho faly hanome anao amin'ny fanompoana mahafa-po.